Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || नेपाल आईडलका प्रतिस्पर्धि सुरज थापाले ‘ओ प्रिया’ किन भने ? – kayakairan.com
नेपाल आईडलका प्रतिस्पर्धि सुरज थापाले ‘ओ प्रिया’ किन भने ?
सुगम संगीतको क्षेत्रमा क्रियाशिल नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धि सुरज थापाले ‘ओ प्रिया’ बोलको म्यूजिक भिडीयो सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो एल्बम क्रन्दनमा रहेको ‘ओ प्रिया’ बोलको म्यूजिक भिडीयो सार्वजनिक भएको हो । थापा उत्कृष्ट ८ मा परेका छन् ।
‘तिमि छैनौ सायद, मेरो भाग्यमा,
तिमि छैनौँ सायद मेरो जीवनमा
तिमि छैनौँ सायद, मेरो कर्मैमा
तिम्रै बाटो कुरिरहन्छु सधैभरी
ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया ओ प्रिया’
मिठो स्वरका धनि थापा नेपाल आइडलमा धेरैले रुचाएका व्यक्ति ह्न । संघर्ष गरेर सांगितिक क्षेत्रमा होमिएका थापाको ‘म बहुला हुँ बहुला’ बोलको गीत निकै लोकप्रिय बनेको थियो । शब्द संगीत तथा स्वर गायक थापा कै रहेको छ । गीत को भिडियोलाई हरी हुमागाईले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियो उत्तम हुमागाईले छायाङ्कन गरेका हुन । निराजन प्रधान र सुमी मोक्तान अभिनित उक्त भिडियोको सम्पादन निशान घिमिरेले गरेका छन । भिडियो सुत्र इन्टरटेनमेन्टले निर्माण गरेको हो । युट्युब मार्फत विश्व व्यापी रिलिज गरिएको छ । यस गीत तथा भिडियोले आफ्नो साङ्गितिक करीयर अझ माथि उकास्न मद्धत गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको गायक थापाले बताएका छन ।
दैलेखमा जन्मेका थापा हाल चिसापानी नेपालगञ्जमा बस्छन् । २०६० सालमा काठ्माण्डौ पुगेका उनी सांगितिक क्षेत्रमा रमाउन घरबाट भागेका थिए । पढ्न आर्थिक अभाव झेल्दै उनी रिक्सामा चाउचाउ र चिप्स बेच्दै धेरैका घर पसलमा पुगे । एफएफमा हुने सांगितिक प्रतियोगितामा सहभागि हुन्थे । प्रथम भएर उनले एक वर्षको संगित सिक्नने अवसरलाई संगितको क्षेत्रमा लाग्न सघाएको थियो । उनी सुरुमा दोहोरीसाँझमा हार्मेनियम बजाउने काम पाए । पछि गजल तथा क्यासिनोमा गीत गजल गाउने अवसर पाए । विस्तारै उनले सूत्र व्याण्ड स्थापना गरी देशव्यापी सांगितिक कार्यक्रम गर्न थालेका थिए । उनलाई कार्यक्रममा बोलाउन थालियो । भारत, बहराइन पुगेर नेपाल फर्किएका थिए । उनी यसअघि पनि तिम्रो सुर, मेरो ताल, बागिना, नेपाली स्टार, नेपाली तारा २, इण्डिएन आइडिएल ९ को तेस्रो राउण्डसम्म पुगे तर सफलता पाएनन् । उनका बुबा छोरा लाहुरे भए हेर्ने चाहना थियो । तर उनी सांगितिक क्षेत्रमा स्थापित बन्ने सपना पुरा गर्ने सोच लिएर हिडेका छन् ।
क्रन्दन एल्वममा समावेश दास्रो गीत ‘ओ प्रियॉ भिडियो हेर्नुहोस् ।